Thwebula Castle TD 1.6.3 – Vessoft
Thwebula Castle TD
Castle TD – a amasu umdlalo omkhulu ukuvikela le nqaba kusukela ezilo ezahlukene. Umdlali usengazikhethela heroes enezici ezihlukene kanye namakhono, abenza ngcono ngokuhamba ukudlula game. Castle TD kuhlanganisa amazinga amaningi yinkimbinkimbi ezahlukene kanye ukudlula lapho umdlali uthola zinhlayiya noma impumelelo futhi andise igunya layo siqu. In Castle TD kukhona izinhlobo eziningana imibhoshongo zokuzivikela kanye nemisebenzi futhi ibanga attack ezahlukene kanye nekhono ukuthuthukisa amakhono abo. Umdlalo ikuvumela ukubuka incazelo kanye izici izitha, imibhoshongo ukuzivikela futhi amaqhawe lapho umdlali uye wakhetha ekuqaleni the game. Futhi in the Castle TD the magic isetshenziswa more impi ngempumelelo nezitha ngendlela eya enqabeni umdlali.
Inani elikhulu amazinga kanye yinkimbinkimbi okwandayo
Izinhlobo Unique amabutho
Izinhlobo ezahlukene nemibhoshongo nezitha ehlasela
Imincintiswano enkundleni nabanye abadlali
Amazwana on Castle TD:
Castle TD Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Megapolis 3.30